Dhalinta Korontada Inc. Kuxigeenka Kormeeraha Guud ee Hay'adda ayaa shaqaaleysiin doona | RayHaber | raillynews
HomeGUUDShaqooyinkaDhalinta Korontada Inc. Agaasinka Guud wuxuu sameyn doonaa iibsiga Kaaliyaha Kormeeraha
15 / 01 / 2020 Shaqooyinka, GUUD
Dhalinta Korontada Inc. (EÜAŞ) Kuxigeenka Agaasimaha Guud Kormeeraha ayaa qaban doona Imtixaanka Galitaanka. EÜAŞ waxay heli doontaa 200 kaaliyayaal kormeerayaal ah oo ka mid ah 10 oo musharrax ah oo loo go'aamin doono iyadoo loo eegayo heerka dhibcaha KPSS. Waqtiga kama dambeysta ah ee arjiga shaqaalaysiinta ayaa la shaaciyey ugu dambeyn bisha Febraayo 03, 2020 ugu dambeyn.
Qeybta Korantada Korontada ee hoos timaada Wasaaradda Tamarta iyo Kheyraadka Dabiiciga. Codsiyada loogu talagalay in lagu sameeyo Ankara ee loogu talagalay (EÜAŞ) Kaaliyaha Imtixaanka Guud ee Imtixaanka Galitaanka Imtixaanka ayaa la bilaabay in la helo. Codsiyada waxaa la dalban karaa ilaa Feebarwari 3, 2020 ugu dambeyn. Murashaxiinta doonaya in ay codsadaan shaqaalaysiinta shaqaalahan oo kale waxaa lagu sameyn karaa qof ahaan xafiiska hay'ad ku taal Ankara ama boostada ugu soo dir cinwaanka ogeysiiska.
Shuruudaha looga baahan yahay musharraxiinta in la codsado Sida ku xusan ogeysiiska rasmiga ah ee Gazette rasmiga ah ee hay'adda ayaa ah sida soo socota:
(1) Inaad heysato 2018 ama ka sare dhibicda nooca-P-2019 oo ah imtixaanka Xulashada Shacbiga ee Dadweynaha (KPSS) oo ay sameysay ÖSYM sanadka 48 ama 80 iyo inay ka mid noqdaan 200 ee qof ee ugu horreeya iyadoo loo eegayo qiimeynta lagu sameeyay bilowga dhibcaha ugu sareeya ee codsadayaasha (Dhibcaha loo siman yahay) Haddii tirada musharixiinta safka ugu dambeeya ay ka badan yihiin hal, dhammaan musharraxiinta leh dhibcahaas waxaa lagu casuumayaa imtixaanka qoraalka ah).
(2) Inuu buuxiyo shuruudaha guud ee ku xusan qodobka 657aad ee Sharciga Shaqaalaha Rayidka ee Lambarka 48.
(3) In da'diisu ka yar tahay 01 sano illaa 01/2020/35 (ku dhashay 01/01/1985 iyo wixii ka dambeeya).
(4) Ka qalin-jabinta sharciga, macluumaadka siyaasadeed, dhaqaalaha, ganacsiga, dhaqaalaha iyo maareynta cilmiga maamulka ee machadyada tacliinta sare oo bixiya ugu yaraan afar sano oo waxbarasho ah, ama machadyo waxbarasho sare oo uqalmayntooda uu aqbalay Golaha Tacliinta Sare.
(5) In aan lala xiriirin shaqada militariga illaa taariikhda imtixaanka qoraalka ah ee murashaxiinta ragga ah.
(6) Aan lahayn wax dhibaatooyin caafimaad ah oo ka horjoogsanaya inay si joogto ah u gutaan waajibaadkooda.
(7) Inaad u sameyneynin u heelitaan adeeg hay'ad aan ahayn EÜAŞ.
(8) U gudbinta dukumiintiyada loo baahan yahay oo ay weheliso foomka musharraxa cinwaanka lagu qeexay qeybta "CODSIGII II-AAD"
Goobta Codsiga iyo Waqtiga:
(1) Codsiyada lagu galayo imtixaanka gelitaanka ayaa bilaabmi doona 14/01/2020 wuxuuna dhamaan doonaa 03:02 ee 2020/17.00/XNUMX.
(2) Araajida waxaa lagu buuxiyaa buuxinta foomka dalabka ee lagu daabacay bogga internetka ee Agaasinka Guud ee EÜAŞ (www.euas.gov.tr) iyo dukumiintiyo kale oo wata dukumiintiyadii loo baahnaa, “EÜAŞ Gudiga kormeerka agaasinka guud ee Nasuh Akar Mahallesi Türkocağı Caddesi Maya: 2 / F1 KLMN Blok Kat: 5 Room no: 515 06520 Cinwaanka Balgat-Çankaya / ANKARA ”shaqsi ahaan ama boostada.
(3) Codsiyada la sameeyo taariikhdaas ka dib, codsiyada la helo taariikhdan kadib dib u dhac ku yimaadda boostada iyo codsiyada lagu sameeyo dukumiintiyada maqan ama aan ansax ahayn looma tixgelin doono.
Mawduucyada Galitaanka Imtixaanka:
Law, a) Dastuur, b) Sharciga Ciqaabta (Buugga 1aad ee Xeerka Ciqaabta oo cinwaankiisu yahay "Qodobbada Guud"; Buugga 2aad, cutubka 2aad, 10aad, "Dambiyada ka dhanka ah Hantiyeed"; Buugga 2, Cutubka 3, 4 Cutubka "Dembiyada Lagaga Hortago Kalsoonida Dadweynaha"; Jabtarka 2, cutubka 4aad, cutubka 1 "Dembiyada ka dhanka ah isku halaynta iyo ku shaqeynta Maamulka Maamulka"), c) Sharciga madaniga ah (marka laga reebo Sharciga Qoyska), ç) Sharciga Waajibaadka (Sharciga Guud ee Waajibaadka) Qaynuunnada ”qaybta, Kirada, Adeegga, Shaqada, Qandaraasyada Surety),
d) Sharciga Ganacsiga ("Bilowga" qayb ka mid ah Xeerka Ganacsiga iyo buugaag 1aad oo cinwaan looga dhigay "Ganacsiga Ganacsiga" iyo 3-aad oo cinwaan looga dhigay "Dukumenti qiimo leh"), e) Sharciga Ganacsiga.
dhaqaalaha; Aragtida dhaqaalaha iyo siyaasada, lacagta, bangiga, amaahda, wareegga ganacsiga, daqliga qaranka, xiriirka dhaqaalaha caalamiga ah iyo hay’adaha, xakamaynta ganacsiga iyo maamulka maaliyadeed, dhibaatooyinka dhaqaale ee hada jira.
maal; Mabaadi'da maaliyadeed iyo siyaasada miisaaniyada, mabaadi'da nidaamka canshuuraha Turkiga iyo shuruucda, mabaadi'da qarashka dadweynaha iyo arrimaha kharashaadka, noocyada miisaaniyada iyo miisaaniyada, deymaha dadweynaha.
Xisaabaadka, Xisaabaadka; a) Xisaabaadka guud, b) Falanqaynta xaashida iyo farsamooyinka, c) Xisaabaadka Ganacsiga iyo tirakoobka.
Luuqada qalaad (mid kamid ah ingiriiska, faransiiska, luqadaha Jarmalka).
Goobta Imtixaanka iyo Taariikhda:
(1) Imtixaanka qoraalka ah waxaa qaban doona Xarunta Waxbarashada Sii-wadata ee Jaamacadda Ankara (ANKÜSEM) oo ku taal Ankara Sabtida, 07/03/2020, inta u dhaxaysa 10:00 - 13.00 (180 daqiiqo) kalfadhiga hal. Ma jiro musharixiin u yimid dhismaha wixii ka dambeeya 15ka daqiiqo ee ugu dambeeya bilowga imtixaanka loo geyn maayo imtixaanka.
(2) Maalinta, saacadda iyo meesha musharraxiinta ay imtixaanka ku galayaan lagu qeexi doono “Dukumintiga Musharaxnimada”.
(1) Waxaa jira laba marxaladood: imtixaanka gelitaanka, imtixaanka qoraalka iyo imtixaanka afka.
(2) Imtixaanka qoraalka ah waxaa lagu qaban doonaa xulashooyinka badan (5 xulasho) habka imtixaanka oo leh hal jawaab oo sax ah. Jawaabaha qaldan saameyn kuma yeelan doonaan jawaabaha saxda ah.
(3) Kuwa ku dhaca imtixaanka qoran looma dhaadhicin doono imtixaanka afka.
(4) Dhibcaha buuxa waa 100 dhibcood oo qoraal ah iyo imtixaan afka ah.
(5) Imtixaanka qoraalka ah, wadar dhan 25 su’aalo ayaa la weydiin doonaa, 125 ayaa laga soo qaadi doona koox kasta oo maado ah.
(6) Si loo arko inuu ku guuleystey imtixaanka qoraalka ah, imtixaanka luqadda ajnabiga waa inuusan ka yarayn 50, mid kasta oo ka mid ah shahaadooyinka laga helay kooxaha imtixaanka kale waa inaysan ka yarayn 60 isla markaana celcelis ahaan ka hooseeyaan 65. 20-ka musharrax ee ugu horreeyay ee helay dhibcaha imtixaanka ugu sarreeya ee murashaxiinta loo arko inay guuleysteen waxaa lagu martiqaadi doonaa imtixaanka afka.
(7) Haddii lambarka 20-aad ee musharraxiinta uu ka badan yahay mid sabab u ah in ay leeyihiin dhibco la mid ah imtixaanka qoraalka, dhammaan musharraxiinta leh dhibcahan waxaa lagu casuumi doonaa imtixaanka afka. Kuwa kale, natiijooyinka imtixaanka qoraalka ah uma qalmaan.
(8) Natiijooyinka imtixaanka qoraalka ah iyo liiska kuwa lagu casuumay imtixaanka afka, http://www.euas.gov.tr Waxaa lagaga dhawaaqay cinwaanka internetka. Murashaxiinta xaq u leh inay galaan imtixaanka afka ayaa sidoo kale la siiyaa ogeysiis qoraal ah.
(9) Imtixaanka afka ah waxaa laga sameeyaa kooxaha maadooyinka imtixaanka qoraalka ah. Imtixaanka afka ah, aqoonta guud ee murashaxiinta ee ku saabsan maaddooyinka imtixaanka iyo tayada shaqsiyadeed ee musharixiinta sida sirdoonka, xawaaraha wareejinta, kartida muujinta, dabeecadda iyo dhaqdhaqaaqa ayaa sidoo kale la tixgelinayaa.
(10) Si loo arko inuu ku guulaystay imtixaanka afka, waxaa muhiim ah in celceliska darajooyinka dhibcaha ay bixiyaan xubnaha guddiga imtixaanka in ka badan 100 dhibcood oo buuxa waa inaysan ka yaraanin 70 dhibcood.
(11) Dhibcaha imtixaanka gelitaanka; Waxaa loo xisaabiyaa iyadoo la qaato celceliska buundooyinka imtixaanka qoraalka iyo hadalka.
(12) Haddii tirada kuwa muujiya guusha ay ka sarreeyaan tirade Kormeerayaasha Kormeerayaasha la qaadayo (haddii tirada kuwa muujinaya guusha ay ka badan tahay 10), kuwa hela dhibcaha imtixaanka sare waxaa la door bidaa. Haddii buundooyinka imtixaanka gelitaanka ay u siman yihiin, musharraxa oo darajadiisa luuqadda qalaad ay ka sareyso ayaa mudnaanta leh. Kuwa kale, natiijooyinka imtixaanka looma tixgelin doono xuquuqda la siiyay.
(13) Musharixiintu waxay diidaan qoraalkooda ku saabsan imtixaannada iyo codsiga imtixaanka u gudbinayaan Guddoonka Gudiga Kormeerayaasha ugu dambeyn 3 maalmood oo shaqo gudahood. Diidmada la helo ka dib muddadan lama tixgaliyo. Diidmada waxaa lagu qiimeeyaa 5 maalmood gudahood oo lagu ogeysiiyaa dadka ay quseyso qoraal ahaan. Diidmada natiijada imtixaanka qoraalka ah, diidmo ka bixista ku dhawaaqista natiijooyinka, iyo baaritaan afka ah ayaa loo diraa Guddoonka Sare ee Guddiga kormeeraha ugu dambeyn 7 maalmood gudahood ka dib ogeysiiska natiijada. Rafcaannada waxaa qiimeeya guddiga imtixaanka 15 maalmood gudahood ugu dambeynna waxaa lagu ogeysiinayaa dadka ay quseyso qoraal ahaan.
(14) Liiska musharixiinta ka gudbay imtixaanka gelitaanka http://www.euas.gov.tr Waxaa lagu shaaciyey cinwaanka internetka sidoo kale loo baahan yahay ogeysiin ayaa loo sameeyaa iyaga.
Ogeysiiska soo iibsiga: Adeegga takhtarka goobta shaqada ayaa la qaadaa (TCDD 7.Regional Agaasinka baratelı
Shirkadda Korontada. Agaasimaha guud
Dhalinta Korontada Inc. Qorista Agaasime kuxigeenka Agaasimaha Guud